China Cold kweqa ukwakha umshini kokusetshenziswa abakhiqizi ukuphila kanye nabaphakeli | Zhongtuo
Indlu imishini Uhlaka
Metal umnyango umshini
umsele wamanzi Machine
Shelf Ziqondile futhi iphaneli umshini
Isitsha endlini umshini
rolling Cold ukwakha umshini ukusetshenziswa empilweni
Lapho kuziwa amazwi ugingqe abandayo ukwakha imishini ka, iningi labantu abangalwazi. Kodwa lapho kuziwa ukwakhiwa kwezindlu, e nsuku zonke asikwazi ushiye. Thatha iphrojekthi Brazile ngoba isibonelo esibonisa, imishini kanjani imporant ugingqe abandayo ukwakha kukhona.
Brazil has a indawo ingqikithi 8.547.400 amakhilomitha square (46% endaweni eNingizimu Melika), simo lesihlanu emhlabeni; elinabantu abayizigidi ezingu-202, it is a ezweni langempela eLatin America. YaseBrazil nsimbi izinqolobane lilinganise lesihlanu emhlabeni, futhi kuba isithekelisi ka nsimbi lesibili ngobukhulu emhlabeni. Ukukhiqizwa bauxite kuyinto yesibili kuphela e-Australia, abanekhono eqinile ezimbonini. Amaminerali ezifana uranium, manganese futhi nickel futhi zinethuba amasheya elikhulu. akhawunti Amachibi izinsiza-12% emhlabeni jikelele angenasawoti imithombo. Brazil ikhofi phambili emhlabeni wonke ekukhiqizeni ngobukhulu futhi amazwe wangaphandle futhi njengoba "ikhofi umbuso" ezaziwayo. Brazil futhi ushukela phambili emhlabeni wonke ekukhiqizeni ngobukhulu futhi amazwe wangaphandle, esingesesibili ngobukhulu okuletha kukhompiyutha producer and isithekelisi, futhi ngobukhulu corn umkhiqizi. Ummbila nokuthengiswa aphakathi phezulu emihlanu emhlabeni futhi amazwe wangaphandle of yenkomo kanye inkukhu esikhulu kunazo zonke emhlabeni.
Kodwa iningi cognition Chinese, Brazil iyizwe ngozamcolo izidakamizwa, ukuphanga njalo, futhi emibusweni ekhohlakele kakhulu.
Ngobusuku buka-September 2, 2018, kwaqubuka umlilo e eNational Museum of Brazil eRio, futhi umlilo eyathatha ebusuku wabhubhisa amaqoqo kwezigidi ezingu-20. Isizathu sokuba umlilo kokuqala kwaba ukuthi izindleko Museum ngelulwa, lesi sakhiwo wayengumJuda e labhidlika, futhi Museum equkethwe amakhemikhali oluvuthayo kepha anibanga uhlelo ukuvikelwa umlilo. Kodwa eqinisweni, yesigemegeme le-Portuguese isakhiwo zomlando engu-200 ubudala ngokunembile waphansi ecacile kuyanda wezwe nokuwa: nodlame lwezombangazwe, kuba buthaka kwezomnotho, Brazil iwumthombo eqinile kodwa uye wahluleka ukuqeda le " phakathi engenayo isicupho ", ngisho rankings kwezomnotho okwenzeka emhlabeni wonke ngo Isampula amazwe ukuthi njalo uya ekwehleni.
Yiqiniso, ulwazi olungenhla akuhlangene nale sihloko. Namuhla, ngokubonisa Homestay ezincane (noma resort izivakashi) iphrojekthi zendawo, sibheke ingwe ubone isicelo of okuhlinza ukukhanya eBrazil.
isikhathi Iposi: Nov-07-2018
Cangzhou Zhongtuo Roll Owenza Machinery Co., Ltd.
Pipe Ukwenza Machine
Q: Tim, ngaya amthengele plastic abakhwabanisi ipayipi, nangemva ubuka zonke izinhlobo, ikhanda lami waqala ngomvimbo. Nganquma ukuhamba esitolo futhi ukwenza ucwaningo oluthile. Ngine imisebenzi eminingana okuyiwona Ngidinga ipayipi plastic ....
Kusihlwa Update: Trans Intaba iphayiphi r ...
Isihloko othembekile ngempela kwisiKhulu yeMantshi ngeke ukweluleka noma uthumele ukuba izinyathelo ezingafanele. IKhabhinethi Liberal uye kabusha ivume Trans Intaba iphayiphi ukunwetshwa, okuyinto uzonginika cishe 600,000 ba ...
Lapho abanye abahloli yethu asanda Giant sika TCR Advanced Pro SL1-spin, ke sazibonakalisa ukuba umshini umxhwele ngobuqotho ukuthi izipesheli konke ungathanda kusuka yamahhashi thoroughbred. Kodwa yini ongayenza expe ...
I emafektri oversea eNdiya naseNingizimu ...
Thina, ZHONGTUO Roll Owenza Imishini ngabe athengiswe imikhiqizo yethu ukuze Amazwe engaphezu kwengu-60 futhi Izindawo, ikakhulukazi e-India nase-South America. Sinekhono lokwenza futhi beqiniseka nge Roll yethu Owenza Machine ezokwenza ...
Lapho kuziwa amazwi ugingqe abandayo ukwakha imishini ka, iningi labantu abangalwazi. Kodwa lapho kuziwa ukwakhiwa kwezindlu, e nsuku zonke asikwazi ushiye. Thatha iphrojekthi Brazile i t Ngokwesibonelo ...
Umhlahlandlela - Imikhiqizo Zezıhlabane - Ibalazwe - AMP Ucingo
Hg50 Tube Line , Stud Track Machine, Zophahla Ishidi isichuse Ukwenza Machine, Rolling Ukuvala Door Roll Owenza Ukwenza Imishini , Metal Deck Owenza Imishini , Isinyathelo isichuse Ukwenza Machine ,